Dhowr qof oo lagu dilay Dhadhaab
22 Dec 22, 2012 - 6:07:12 AM
Dabley hubeysan ayaa afar qof oo isku hayb ah ku dishay deegaanka Dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo la sheegay in kooxaha dilka geystay ay markiibta goobta ka baxsadeen, waxayna tani sare u qaadaysaa xaalada amaan-daro ee ka jirta xeryaha Dhadhaab.
Goobjoogayaal ku sugan Xeryaha Dhadhaab ayaa sheegay in dadka la dilay ay ahaayeen xoolo dhaqato, ayna dileen kooxo hubeysan oo baxsaday, iyadoo laba ka mid ah goobta lagu dilay, sidoo kalena kooxaha hubeysan ay jidka u galeen dad u socday halka uu dilku ka dhacay ayna ka dileen laba qof iyagoo dhaawacay qof kale.
Xeryaha Dhadhaab ayaa waxaa tan iyo sanadkii hore ka dhacayay falal amaanka wax u dhimaya oo ay ka mid yihiin dilal qorsheysan, afduubyo iyo qaraxyo iyadoo uu dilkan imaanayo xili ay Dowlada Kenya ku amartay Qoxootiga iyo dadka aan sharciga lahayn inay tagaan xeryaha Qoxootiga.
Booliiska Kenya ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ay ku raadinayaa kooxihii weerarka ka dambeeyay, iyadoo booliisku ay xalay tegi waayeen halka uu falku ka dhacay sababo ay ku sheegeen amaanka oo xun.
Dilalkan ayaa la sheeagyaa inay salka ku hayaan aano beeleed, iyadoo warar kale ay iyaguna sheegayaan inay yihiin kuwo ay geysteen kooxo bastoolado watay oo loo maleynayo inay xiriir la leeyihiin Al-shabaab.
Dhadhaab ayaa waxay hoy u tahay in ka badan 630,000 oo qoxooti Soomaaliyeed ah kuwaasoo ka cararay colaada iyo abaaraha ka taagan Soomaaliya, waxaana ka mid ah dadka xeryahaas ku jira kuwo tagay 21-sano ka hor.